Amagumbi okulala kwistudiyo sendlu yegcisa leplastiki. - I-Airbnb
Amagumbi okulala kwistudiyo sendlu yegcisa leplastiki.
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguTeo
Ndirenta amagumbi kwindlu yesitudiyo somculi eAlmazcara, iBierzo epheleleyo, iikhilomitha ezisixhenxe ukusuka ePonferrada nokufikelela lula kwezona ndawo zinomdla zabakhenkethi.
Indlu ithule kakhulu kwaye ayinabamelwane abaphazamisayo.Amagumbi abekwe kumgangatho wokuqala wendlu, azimele ngokupheleleyo kwindlu yonke.Ithuba lokuhlala kwindawo ekhethekileyo eneendawo eziqhelekileyo kunye neendawo zokufunda ngokusondeleyo kunye neendawo zokufunda. 600mb uqhagamshelwano lwefayibha. ilungele ukusebenza ngocingo.
Indawo endiyinikezelayo yindlu yelali enegadi, indawo yokupaka kunye nokuzola okuninzi.
Indlu iphakathi kwidolophu yase-Almazcara ene-atmosphere yasemaphandleni, isondele kakhulu kwiindawo ezinomdla: i-Ponferrada, i-Pantano de Barcena, i-Peña de Congosto ene-spa, indlela yamatye, iindlela ze-Cobrana, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Teo
Ndingavuya ukwabelana neendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Almazcara